မြတ်မော်တင်စွန်းစေတီတော်တွင် အသစ်တင်လှူမည့် စိန်ဖူးတော်၊ ငှက်မြတ်နားတော်၊ ရွှေထီးတော် ပုသ? - Yangon Media Group
ပုသိမ်၊ ဇန်နဝါရီ ၂၇- ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး ငပုတောမြို့နယ် ဆံတော် ရှင် မြတ်မော်တင်စွန်းစေတီမြတ်ကြီး၌ အသစ်တင်လှူမည့် ရတနာစိန်ဖူး တော်၊ ငှက်မြတ်နားတော်နှင့် ဘုံသုံး ဆင့်ရွှေထီးတော်တို့ကို ပင့်ဆောင်ပူ ဇော်လာခဲ့ရာ ဇန်နဝါရီ ၂၆ ရက် ည နေပိုင်းတွင် ပုသိမ်မြို့သို့ ရောက်ရှိလာ ကြောင်း သိရသည်။
ပင့်ဆောင်ပူဇော်လာသည့် စိန် ဖူးတော်၊ ငှက်မြတ်နားတော်နှင့် ဘုံ သုံးဆင့်ရွှေထီးတော်တို့ကို ဇန်နဝါရီ ၂၆ ရက်မှ ၂၈ ရက်အထိ ပုသိမ်မြို့ ရွှေမုဋ္ဌောဘုရားစေတီတော်မြတ်ကြီး အရှေ့ဘက်မုခ်ရှိ အာရုံခံတန်ဆောင်း ထဲတွင် ရင်ငွေ့လှုံအပူဇော်ခံထားရှိမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ဇန်နဝါရီ ၂၈ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် မြတ်မော်တင်စွန်း စေတီတော်မြတ်ကြီးဆီသို့ ယာဉ်တန်း ဖြင့် ပင့်ဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဧရာ ဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ စည် ပင်သာယာရေးဝန်ကြီး ဦးကျော်မြင့်က ပြောသည်။
”မြတ်မော်တင်စွန်းစေတီတော် မြတ်ကြီးကို ရင်ပြင်တော်နဲ့ စေတီတော် ဘက်စုံမွမ်းမံပြုပြင်တာတွေ ပြုလုပ်နေ တာဖြစ်ပြီး အခုလိုပင့်ဆောင်လာတဲ့ စိန်ဖူးတော်၊ ငှက်မြတ်နားတော်နဲ့ ဘုံ သုံးဆင့် ရွှေထီးတော်တို့ကို ဘုရားပွဲ စတင်တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်နေ့မှာ ထီး တော်တင်လှူပွဲ ပြုလုပ်သွားမယ်”ဟု စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီး ဦးကျော် မြင့်က ပြောသည်။
ဆံတော်ရှင်မြတ်မော်တင်စွန်း စေတီတော်မြတ်ကြီး ထီးတော်တင်လှူ ရန်နှင့် ရင်ပြင်တော်ဘက်စုံပြုပြင် မွမ်းမံ နိုင်ရန်အတွက် နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏လမ်းညွှန်မှု၊ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ အဖွဲ့၏ ကြီးကြပ်မှုများဖြင့် မြန်မာ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာ အဖွဲ့ချုပ်နှင့် နယ်စပ်တောင်တန်းဒေသ သာသနာနုဂ္ဂဟအသင်း (ဗဟို)ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာခင်ရွှေက သုံးနှစ်ခန့် အချိန် ယူကာ ငွေကျပ်သိန်းပေါင်း နှစ်သောင်း ခန့် အကုန်ကျခံပြုပြင်နေခြင်းဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
မြတ်မော်တင်စွန်းစေတီတော် မြတ်ကြီးသည် ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်သက်တော် ထင်ရှားရှိစဉ်ကတည်းက ဘုရှားရှင်၏ ဆံတော်မြတ်များကိန်းဝပ်စံပယ်ကာ ဌာပနာကာ တည်ထားကိုးကွယ်သည့် စေတီမြတ်ကြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ နှစ်စဉ် တပို့တွဲလပြည့်ကျော်တစ်ရက်မှ တပေါင်းလပြည့်နေ့အထိ တစ်လကြာ ဗုဒ္ဓပူဇနိယပွဲတော်ကို ကျင်းပနေပြီး အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဘုရားဖူးပြည်သူများ လာရောက်ဖူးမြော် ကြည်ညိုသည့် ဘုရားတစ်ဆူလည်းဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
ပြည်တွင်းတွင် လာရောက်လုပ်ကိုင်နေသည့်လုပ်ငန်းများကို သိမ်းယူပါက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေသ
သမ္မတထရန့်က ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကိုဖြေလျှော့ပေးရန် အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုဖြင့် လမ်းဖွင့်ပေး??
ကာဗွန် ထုတ်လွှတ်မှုများကို လျှော့ချခြင်း မဟာဗျူဟာကို ယခုနှစ်တွင်း အပြီးရေးဆွဲမည်
အင်ဆိုဝမ် ယခုလကုန်တွင် စစ်မှုထမ်းတော့မည်
ရွှေတစ်ကျပ်သား ကျပ် (၁ဝ) သိန်းကျော် ပေါက်ဈေးရှိနေသော်လည်း ရွှေတိဂုံစေတီတော်တွင် တစ်ကျပ်သား ရ